ဖာဂူဆန်ခေတ်အလွန်စီးပွားရေးအကျပ်တည်းများနဲ့ မန်ယူအောင်မြင်မှုပျောက်ဆုံးနေခြင်းတရားခံ – FBV SPORT NEWS
November 27, 2020 By admin Articles
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ရဲ့ တောက်ပဆုံးသော ရွှေရောင်နေ့ရက်တချို့ဟာ မန်ယူဂန္တဝင်နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန် ခေတ်အလွန် မှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျဆုံးစပြုလာခဲ့ပါတယ်…
စီးပွားရေးအကျပ်တည်းတချို့ကိုလည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့လိုက်ရပါသေးတယ်…..ဒီလိုအဖြစ်အတွေ့ ဘယ်ကနေအစချီရမှန်းမသိတဲ့ ပြဇာတ်တပုဒ်လို ရှုပ်ထွေးပြီး ဘောလုံးလောက ဟာ အပြောင်းအလဲမြန်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်.အရင်ဆုံး မန်ယူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရာသီတွေကို အစချီလိုက်မယ်ဆိုရင် ဘက်ခမ်း၊ ရော်နယ်ဒို တို့လို လူတိုင်းမသိမရှိတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ Image တွေနဲ့ နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန် တဲ့ မှော်ဆန်ခဲ့တဲ့
ရာသီခရီးကြမ်း ဖြတ်သန်းမှုတွေ management တွေအောက်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားများကို အကြိမ်ကြိမ်ကိုင်မြောက်ဖူးခဲ့ကြရပါတယ်…ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ မန်ယူရဲ့ဖလားရာဇဝင်အတိအကျမဖော်ပြပေးတော့ပါဘူး…မန်ယူဖန်တိုင်းသိနေလို့ပါ….
ဖာဂူဆန် ခေတ်မှာ ရိုင်ယန်ဂစ် ပေါစခိုလ်တို့ ငယ်မွေးခြံပေါက်တွေရဲ့ အခန်းကလည်း နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန်နဲ့အတူအရေးပါအရာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်…အဲဗာတန်ကနေ ရောက်လာပြီး
ဖာဂူဆန်ရဲ့ သားသဖွယ် ခိုင်းတိုင်းမငြီးမငူ နဲ့ မန်ယူကို အပေးဆပ်နိုင်ဆုံး ကျနော်တို့ ဂန္တဝင်တိုက်စစ်မှူးကြီး ဝိန်းရွန်းနီ ရဲ့ အရေးပါအရာရောက်မှုတွေ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားတွေ ကြောက်စရာကောင်းခဲ့တဲ့ မန်ယူနောက်တန်းလူငယ်ကစားသမားတွေဟာ
ဘာကြောင့် ဖာဂူဆန်ခေတ်အလွန် မှာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီး စီးပွားရေးအကျပ်တည်းတွေ ကစားသမားခေါ်ယူမှုအမှားတွေ နည်းပြတွေ ကို အချိန်ပေးနိုင်မှုတွေ အစရှိသော ပြသနာများစွာကို တွေ့လာ၇ပြီး မန်ယူရဲ့အောင်မြင်မှု ခရီးဟာမှေးမှိန်စပြုလာပါတယ်…
အဲ့ဒီအချက်တွေကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့အချိန်က 2012 ကစရမယ်လို့ဆိုပါတယ်….ဒါကတော့ Wiki မှီငြမ်းပါ…2012 မှာ ယခုလက်ရှိ CEO အက်ဝုဒ်ဝပ်ဆိုတဲ့ လူငယ်စီးပွားရေးသမား ထိုင်ခုံပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ယခု လက်ရှိ ဆိုးရှားလ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကစားသမားခေါ်ယူခြင်းပြသနာကို ကျနော်တို့ နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန် ကြုံတွေ့သွားခဲ့ရပါတယ်….
အဲ့ဒါက ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တော့….ဆိုးရှားလ် အဖြစ်အပျက်ကို နမူနာကြည့်မယ်ဆိုရင် ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူချင်နေရာကနေ အက်ဝုဒ်ဝပ်ရဲ့ စီးပွားရေးအကွက်များနှင့်ချုပ်ကိုင်ကာ
အပြောင်းအရွေ့ရာသီဟာ နည်းပြနှင့် ပရိတ်သတ်များအတွက် အသက်မဲ့စေခဲ့ပါတယ်…..ကျနော်တို့ နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန်မှာ ဒီလို အခက်အခဲ အက်ဝုဒ်ဝပ်လက်ထက်မှာကြုံသွားရမယ်လို့ Wikiမှာ Alexander Ferigos က သုံးသပ်ပြထားခဲ့ပါတယ်…
နောက်တခုစီးပွားရေးအကွက်မြင်လွန်းနေသော အက်ဝုဒ်ဟာ အသင်းရဲ့ ဝါရင့်ကစားသမားတွေကို မထိမ်းထားပါဘူး…..အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်သော ကစားသများတချို့ နဲ့အလားလာကောင်းနိုင်သောကစားသများစွာကိုလည်း ရောင်းချကာ သူ့ရဲ့ စီးပွားရေးအကျပ်တည်းကို ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့လဲခဲ့ပါတယ်….
အက်ဝုဒ်ဟာဒီလောက်နဲ့ပြီးမသွားဘဲ ဝီန်းရွန်းနီအပေါ်မှာ လည်း သစ္စာမဲ့ခဲ့ပါသေးတယ်…..၂၀၁၃-၂၀၁၄ မှာ ရွန်းနီကို နေရာပျောက်အောင် နည်းပြတွေကို Manage လုပ်ခါ နောက်ဆုံး အသင်းမှ အလွယ်တကူ ထွက်ခွာစေခဲ့ကာ ပရိတ်သတ်တွေဆီက မျက်ရည်ချူပြီး မန်ယူ Image ကိုဆွဲတင်ခဲ့ပါတယ်….
နောက်ဆုံးမန်ယူနည်းပြတိုင်း အက်ဝုဒ်ဝပ်ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုများနောက်ကနေ အလိုက်သင့်လိုက်ပါကာ ပရီးမီးယားလိဂ်ခရီးကြမ်းကိုဖြတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို အထင်သားမြင်နေရခဲ့ပါတယ်….ယခုရာသီရလဒ်များကို နည်းပြဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ မော်ရင်ဟို ဗန်ဟား မိုယက်စ်တို့လက်ထက်လောက် မထိန်းချုပ်ဘူးဆိုတာကိုမြင်နေရပါတယ်…..
ဆိုးရှားလ်ရဲ့ မန်ယူကစာသမားဟောင်းဖြစ်လို့လား…..အနေအေးပေမဲ့ အကပ်ကောင်းတာလား…..နည်းပြီကြီး ဆိုးရှားလ် ရဲ့ Game Plan တွေကောင်းလို့ အက်ဝုဒ်ဝပ် ငြိမ်နေရတာလားဆိုတာကို ကျနော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်….ကပ်ရောဂါအတွင်း ဖာဂူဆန်လာကြည့်တယ် …
အဲ့တော့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များလည်း ဒီဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြီးရင် ကျနော်နဲ့အတူ အက်ဝုဒ်ဝပ်ဟာ မန်ယူအသင်းအောင်မြင်မှုများပျောက်ဆုံးခြင်းရဲ့ တရားခံလား…တခြားကြောင့်လားဆိုတာကို ဒီပို့စ်လေးရဲ့ Comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါအုံး…